Oppo ၏ပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းသည်မျက်နှာပြင်ကင်မရာဖြင့်ရုပ်ပုံအရည်အသွေးကိုထိခိုက်စေနိုင်သည် Androidsis
Oppo သည်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ 'မမြင်ရသော' ကင်မရာဖြင့်စမတ်ဖုန်းကိုပထမဆုံးစတင်ခဲ့သည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ဒီလက်မှတ် ဤသည်ကား၊, ဒါပေမယ့်ကကမ်းလှမ်းလိမ့်မည် panel ထဲရှိ resolution နိမ့်သောကင်မရာအာရုံခံကိရိယာ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နည်းပညာကအနည်းဆုံးအဲဒါကိုအပြည့်အဝပြီးပြည့်စုံတဲ့အထိဖြစ်နိုင်သမျှချောချောမွေ့မွေ့အလုပ်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။
Oppo ၏ဒုဥက္ကpresident္ဌ Brian Shen မှ Weibo မှတစ်ဆင့်၎င်းကုမ္ပဏီ၏လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သောထုတ်ပြန်ချက်များကိုပြောကြားခဲ့သည်။ အသေးစိတ်ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
တနည်းအားဖြင့်အလုပ်အမှုဆောင်ကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် selfies များကိုစွန့်လွှတ်ရန်အတွက်မျက်နှာပြင်အောက်ရှိကင်မရာနည်းပညာသည်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဒီဖြေရှင်းချက်ပါတဲ့ပထမဆုံးကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့စမတ်ဖုန်းကအရည်အသွေးမြင့် Self-photos နဲ့ပတ်သက်ရင်အကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးကိုမပေးသင့်ပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့၎င်းသည် optical image အရည်အသွေးလျော့နည်းစေသည်။ ၎င်းသည်အနာဂတ်တွင်မသိသေးသောမိုဘိုင်းဖုန်းဝယ်ယူသူများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
Brian Shen မှတင်ပြချက်အရဖန်သားပြင်ပေါ်ရှိကင်မရာသည်အရည်အသွေးဆုံးရှုံးမှုကိုပြသလိမ့်မည်
Yiren ကနည်းပညာအသစ်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အစပိုင်းတွင်ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်မည်ဟုလည်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ In-screen ကင်မရာသည်ပုံမှန်တွင်းအပေါက် (သို့) bezel ကင်မရာကဲ့သို့တူညီသောပုံအရည်အသွေးကိုထုတ်လုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သူလည်းသူကပြောသည် နည်းပညာအစုလိုက်အပြုံလိုက် - ထုတ်လုပ်ရန်ခက်ခဲသည်.
သို့သျောလညျး Oppo ကသင့်ကိုဤအဖြေကိုအမြန်ရှာတွေ့နိုင်လိမ့်မည်။ လက်ဗွေ၏သော့ဖွင့်ခြင်းနည်းပညာသည်ယခုကဲ့သို့တိကျမှုမရှိခြင်းနှင့်၎င်းကိုလက်ကိုင်ဖုန်း၏မျက်နှာပြင်အောက်တွင်ထည့်သွင်း။ မရနိုင်သောအချက်ကိုမရေတွက်ခဲ့ကြောင်းသတိရပါ။ ယင်းသည်အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှဖြေရှင်းခြင်း၊ စုံလင်ခြင်းနှင့်စာဖတ်ခြင်းတွင်မည်သည့်ပျက်ကွက်မှုမျှမပါဘဲ panel ထဲတွင်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့သည်။
ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ မြင်ရသောမြင်ကွင်းကင်မရာနည်းပညာကိုပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းမတိုင်မီစိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုမကြာမီတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ Oppo သည်၎င်းပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ Honor သည်တင်ဆက်နေသည့်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည် ဒီနည်းပညာနှင့်အတူပြနာများ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Oppo ၏ကင်မရာပါသည့် Oppo ၏ပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းသည်ပုံရိပ်အရည်အသွေးကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်